Manana mpanara-maso 2 ho an'ny Mac ve ianao? Sokafy ny rindranasa eo amin'ny monitor izay notendrenao teo aloha | Avy amin'ny mac aho
Ary matetika tsy mahazatra ny fanaraha-maso roa ao an-trano hiaraha-miasa amin'ny Mac, saingy marina fa mihamaro ny mpampiasa manana efijery maro ao an-trano, tsy lazaina intsony ireo toeram-piasana izay manana mpanara-maso 2 na maromaro mifandray amin'ny Mac mahazatra izany.
Amin'io lafiny io, ny zavatra ho hitantsika anio dia ny safidy manampy ny fizarana efijery ho an'ny fampiharana iray ao amin'ny Mac. Mba hanomezana ohatra tsotra sy haingana dia azontsika lazaina izany monitor 2 sokafy foana ny pejy Pejy eto amin'ity efijery ity ary toy izany koa amin'ireo rindranasa rehetra tadiavinay ary mifandimby ireo fampiharana tadiavinay.
Azo atao ny manampy efijery fanampiny amin'ny Mac ary azo atao amin'ny fomba maro izany. Azonao atao ny mampifandray fampirantiana hafa ankoatry ny fampisehoana namboarina, na manampy fampisehoana amin'ny fampisehoana efa ampifandraisinao (raha tsy manana fampisehoana namboarina ny Mac-nao). Azonao atao ihany koa ny mampiasa AirPlay sy Apple TV mba hitaratra na hanitatra ny birao Mac anao amin'ny TV HD. Raha vantany vao mifandray ny efijery, ity ny fanokafana ireo rindranasa amin'ny monitor na iray hafa izay toa sarotra be ny manamboatra na mitantana, dia tsotra kokoa noho ny eritreretintsika ary azontsika atao ny manao an'io fampiroboroboana io mivantana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra havanana amin'ny tsirairay amin'ireo fampiharana izay ananantsika ao amin'ny Dock.
Andao hojerentsika ny maha-tsotra azy io amin'ireo safidy natolotry ny fampiharana azy rehefa tsindrio havanana amin'izy ireo ao amin'ny Dock. Manana safidy maromaro isika rehefa manindry fa ny Desktop eo amin'ny efijery ihany no mahaliana anay amin'ity tranga ity:
Desktop eo amin'ny efijery 1: raha mampavitrika an'ity safidy ity isika dia ho hitantsika eo amin'ny birao ny fampiharana fa eo amin'ny efijery 1 ihany
Desktop eo amin'ny efijery 2: amin'ity tranga ity izay ananantsika rehefa mampandeha ity safidy ity amin'ny fampiharana dia ho hita eo amin'ny efijery 2 ny fampiharana
Ary vonona. Ankehitriny rehefa mampiasa an'ity rindranasa ity izahay dia hisokatra mivantana amin'ny efijery voatendry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Manana mpanara-maso 2 ho an'ny Mac ve ianao? Sokafy ny fisoratana anarana eo amin'ny monitor izay notendrenao taloha
Io ampahany amin'ny fanendrena io, toa tsy miseho amiko, manana macOS High Sierra aho. Moa ve aho tokony hampavitrika zavatra ao amin'ny terminal aloha?
Rehefa tsindrio havanana ny rindrambaiko> Safidy dia tsy hita izany sa volondavenona maivana?
Raha ny tokony ho izy dia tokony hiseho tsy misy olana miharihary raha tsy manana mpanara-maso roa ianao dia tsy afaka manindry azy.
fiarahabana ary lazao anay
Miresaka ny fananana mpanara-maso "roa na maromaro" ianao, ary koa safidy iray hafa ny mampifandray amin'ny alàlan'ny Airplay.
Azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny Airplay amin'ny monitor roa na maromaro ve izany? Sa iray ihany?
Valiny tamin'i Robin